Uqala njani ulwalamano?
Uqala njani ulwalamano olufanelekileyo? Ngamanye amaxesha, kunye nenyaniso yokuba umntu omnye wabonisa enye ingqalelo kwaye wambeka ngendlela yomntu. Ngokomzekelo, wagxininisa inzuzo ethile. Ngamazwi ambalwa nje, ngoku i-iron cynic kunye namava okukujonga ngaphandle kobugwenxa kunye nangentsikelelo, ukuthini ukuthetha ngabantu abalungileyo.
Inani elikhulu labantu lithetha ukuba ulwalamano lufanele luqale ngesiseko sothando kunye nethemba, kodwa uthando lenye indlela eya kufinyelela ngayo. Kuvela ukuba isondo, uthando - oku kuyinyathelo lesibini ekufuneka uyifumane. Ngoko ke, ukuhlala kuzo zonke iintlobo zobudlelwane kukuphela kwintetho. Ngaphandle kwendawo ye-zoo - unxibelelwano kuphela ngumgcini-mboleko ongeke udliwe. Kwaye, kwimeko apho, kukho ukuthetha ngehlabathi lethu lanamhlanje.
Ukunxibelelana yindlela yokuqonda kunye nokusebenzisana kweehlabathi ezimbini, ukuchasana ezimbini: amadoda nabasetyhini. Ukunxibelelana, sifunda ngakumbi malunga nomnye, isimo sengqondo ekuqondeni ihlabathi langaphakathi leqabane lethu liyanda. Namhlanje, abaninzi banokuqaphela ukuthetha njengomdlalo we-roulette, - xa kwenzeka, kwaye ukuba inenhlanhla, ngoko ke kukhetho olufanelekileyo lomlingani. Akukho nhlanhla kwangokokuqala, faka isibini okanye yesithathu. Abanye abantu bavumela izinto ukuba zizenzele zona-makwaphule ubudlelwane ngokwabo, ngaphandle kwemizamo eyongeziweyo.
Kufuneka kugxininiswe ukuba kukho ibhinqa kunye nendoda ngokujonga ubuqili bobudlelwane. Ingcamango yendoda ebuhlotsheni iya kuhlala isekelwe kwimeko yokuqala yoqhagamshelwano-ngobudlelwane nomama. Umgangatho ofunyanwa ngumntu kumabhinqa akhe ufana nomama, ngoko ke amandla okudala umxholo wokhuseleko ngelixa unakekelwa ngumama. Bafuna kuphela inguqu ephuculweyo yomama, oya kukhusela ubomi bakhe obulandelayo. Ngokuqhelekileyo ubudlelwane obunjalo bukhula ngokubhekiselele kwimeko eyaziwayo -kuqala kwinqanaba eli thobela indoda, kamva ukulahlekelwa ngumdla wesondo. Ngenxa yoko, lo mfazi uthatha inxaxheba yintloko kwintsapho, eyinika ilungelo lokwenza izigqibo nokuvavanya imeko. Kamva, ibhinqa liyaqaphela ukuba lilahlekelwa ithuba lokuba ngumfazi wokwenene, kodwa ifuna uxanduva olukhulu. Indoda ifika kwisigqibo sokuba ulahlekelwe inkululeko yakhe, kwaye uthando lwakhe kumlingane luye lwaguqulwa lwaba luloyiko kunye nokungazinzi. Yaye isiphumo sobudlelwane obungalunganga siqaliswe, kwaye bobabini abanakuqonda ukuba kutheni le nto yenzeka.
Umbono wowesifazane - ubuhlobo kunye nobulili obuhlukile buhluke kunabantu. Abasetyhini abanako ukufumana umzekelo wobudlelwane babo noyise. Okubaluleke ngakumbi kubo kukuvunyelwa kwabasetyhini abajikelezile. Abasetyhini, ngokungangabazeki, bafundise abayeni babo kwaye bahlale belana ngokubambisana ngeendlela zokuxhaphaza isondo esahlukileyo. Ibhinqa lifuna ukuba ngumntu ngokupheleleyo, zombini kunye nangaphandle. Bazama ukuzithumela indoda, ngokokuba umntu ngekamva akayi kwenza oko okufunwa ngumfazi, kodwa naye wayevakalelwa le minqweno. Kwaye konke oku kuveliswa kwenzeka kwinqanaba lomthando. Kwaye ukuba abazange banikezele ukuqeqeshwa, ngoko-scandals edlala. Ngoko-ke akukho myeni othobelayo - oku kuyingozi, okufuna ukulungiswa.
Ngoko kuvela ukuba abaninzi abasetyhini, ngababini, baqala ukulawula nokunyamekela imfundo yendoda, kwaye indoda ikhangele unina kwiqabane kwaye inika amandla ezandleni zayo. Kwaye bobabili baphupha ubomi bentsapho obonwabileyo. Le ngenye yeendlela ongakhetha ngayo ukuqala ulwalamano oluchanekileyo.
Unxibelelwano ngenye yexesha elibalulekileyo lobomi bethu. Kukunxibelelwano ukuba ulwalamano luqala. Kwaye ukunxibelelana, kunye naluphina ubuhlobo, kuyimfuneko ukufunda nokukhetha ngokubhekiselele kubomi.
I-Phraseology, ukusuka kwi-fly fly eyenza indlovu
Imenyu kunye nemithetho yosuku lokuzila
Ukukhawuleza ukuthwala izicathulo
Isobho kunye ne-eggplant kunye nobomvu obomvu